၃၀ ကျော်ဖီလင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Critic » ၃၀ ကျော်ဖီလင်
Posted by Moe Z on Sep 13, 2011 in Critic, Drama, Essays.. | 39 comments
အဖြစ်ကမနှစ်ကနဲ့မတူ တစ်ယောက်ယောက်ကိုပြောပြရင်လည်း ရူးနေလားလို့အမေးခံရမှာသေချာတာမို့ ရွာထဲကလူတွေ ကိုပဲဒုက္ခပေးတော့မယ်။ ဘုရားစူး ဒီအရွယ်အထိအချစ်ဆိုတာဘာမှန်းမသိခဲ့ရပါ။ ၁၀တန်းအောင်ကတည်းက ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ် ကိုယ်ရပ်နိုင်တယ်လို့ကြွေးကြော်ကာ အလုပ်လုပ်ရင်း ဘွဲ့ရခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် up date ဖြစ်အောင်ပေါ်သမျှသင်တန်းတွေတက်ရင်းနဲ့ အားလပ်ချိန်ကိုမရှိခဲ့တာ။ သူငယ်ချင်းတွေဖိတ်စာလာပေးတော့လည်း အလှဆုံးပြင်ပြီးသွားလိုက်တာပဲ။ ကိုယ့်အလှည့်ဘယ်တော့လဲလို့မေးရင် ကိုယ့်ဒုက္ခကိုယ်မရှာဘူးလို့ ခပ်တည်တည်နဲ့ ပြန်ပြောပစ်ခဲ့တာချည်းပဲ။ တကယ်လဲ ကိုယ့်ကိုသဘောကျတဲ့သူတွေ ၀ိုင်းနေခဲ့တာကိုး။ မင်းသမီးရှုံးအောင်လှနေတာတော့ မဟုတ်ပေမယ့် တော်တော်လေးကြည့်ကောင်းတာတော့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် လက်ခံပါတယ်။ တွေ့တဲ့သူတိုင်းကလည်း အသားအရည်အရမ်းလှတာပဲလို့ မှတ်ချက်ပေးကြတယ်လေ။ ပြီးတော့ကိုယ်က ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းတွေကိုစိတ်ဝင်စားတယ်။ ခေတ်နဲ့အညီ လုံလုံခြုံခြုံနဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ယုံကြည်မှုရှိစေမယ့် ကိုယ့်ရဲ့ဒီဇိုင်းတွေကို သူငယ်ချင်းတွေကသဘောကျကြတော့ မအားတဲ့ကြားကသူတို့ကို ဒီဇိုင်းဆွဲပေးရသေးတယ်။
ကိုယ်က International ကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာဆရာမလေ။ ချွေးမတော်ချင်သူတွေကလည်းပေါမှပေါ။ အိမ်ထောင်ရေးကိုစိတ်မ၀င်စားဘူးလို့ ငြင်းရတာကိုပဲဂုဏ်ယူခဲ့တာ။ တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ ပြောင်းလဲနေတဲ့နည်းပညာနဲ့ ပညာရေးတွေနောက်ကိုအမှီလိုက်ရင်း အသက်တွေလည်းတဖြည်းဖြည်းကြီးလာခဲ့ပြီ။ အခုမှငါအရမ်းအထီးကျန်နေပါလားလို့ ခံစားမိတာတော်တော်လေးတော့ထူးဆန်းတယ်။ ရည်းစားလေးတစ်ယောက်လောက် ထားကြည့်မယ်လို့စိတ်ကူးမိတော့ ကိုယ့်ဘေးမှာဘယ်သူမှရှိမနေတော့။ ကိုယ့်ကိုချဉ်းကပ်တဲ့သူတွေလည်း အသက်အရွယ်နှင့်ဆန့်ကျင်ပြီး တစ်ဖြေးဖြေးလျော့သွားလိုက်တာ အခုချိန်မှာတော့ အဖြေပေးစရာတစ်ယောက်မှကိုမရှိတော့ပါ။ အခုမှဒုက္ခရောက်ပြီ။ သူများမင်္ဂလာဆောင်တွေသွားရင် အထီးကျန်တဲ့ခံစားချက်ကပိုဆိုးတယ်။ ဒါပေမယ့် ရှောင်လို့လည်းမရဘူးလေ။ မျက်နှာနာရမယ့်သူတွေဆိုရင်တော့ သွားရတာပေါ့။ ကိုရီးယားမှာလို ဖူးစာဖက်ရှာပေးတဲ့ agency တွေရှိရင်ကောင်းမယ်။ အင်း..ဒီနေ့ကျောင်းပိတ်ရက်နဲ့ ဥပုပ်နေ့က တိုက်ဆိုင်နေတော့ ရှစ်ပါးသီလယူပြီးဥပုပ်စောင့်လိုက်ပါဦးမယ်။ အရေးထဲ ဆရာတော်ဟောတဲ့တရားက ပါရမီဖြည့်ဖက်တဲ့။ ငိုချင်ရက်လက်တို့ဖြစ်နေပြီ။ ဒီခံစားချက်ကို ဘယ်လိုထိန်းရပါ့………….
(မိုးစက်ရဲ့အစ်မ၀မ်းကွဲတစ်ယောက်နေရာကနေခံစားကြည့်ထားတာ၊ ကိုယ်ပိုင် feeling မဟုတ် :D )
လူပျိုရောင်းရန်ရှိသည် ။ ဟိ .. တရားရစရာပါလားဗျို့ ။ အရွယ်တော်တစ်ဆိတ်ဟိုင်းလို့ အစိတ်လိုင်းမကတော့လဲ မရတာလို ၊ လိုတာမရ ဖြစ်ပြီပေါ့နော် ။
“၃၀ ကျော်ဖီလင်” တဲ.
ဂေါက်သီး ဘ၀ေ၇ာက် သွားပြီထင်တယ်
ဝေးလေ ကောင်းလေ ဆိုပြီး ၇ိုက်ထုတ်တာ
ကျောင်းဆရာမဆိုတော့ ကျောင်းဆရာထီး လူပျိုကြီးတွေနဲ့ တွေ့နိုင်ပါသေးတယ်။ အားမလျှော့ပါနဲ့အုံးလို့။ ;)
ကျောင်းဆရာထီးတွေက နိုင်ငံခြားသားတွေဖြစ်နေလို့တဲ့ မမရွှေအိရေ :D
သူ့အတွက် ဖူးစာပါလာရင်တော့ (30) ကျော် (40) ဆိုလဲ ရမှာပါပဲလေ
အင်း ဟုတ်တယ်…ဖူးစာပါလျှင် ဘယ်သူမှ တားလို့မရဘူး … ။ ကိုယ်တွေ အသိထဲမှာ ရှိတယ် မိန်းမက အသက် 46ဖြစ်နေပြီ ယောကျာ်းက 50ကျော်ပြီ ငယ်ချစ်တွေ ကွဲသွားတာ ..ပြန်တွေ့တော့မှ လက်ထပ်ယူလိုက်တယ် .. အခုတော့ ကလေးမွေးဖို့ ဒုက္ခဖြစ်နေလေပြီလေ .. ဟားဟား
အဲဒီလိုတွေဖြစ်ပြီး ..နောင်တရမှာစိုးလို့.. အတင်းကို..ငယ်တုံးခံစား..စံစားပါလို့.. တိုက်တွန်းနေရတာပေါ့…။
ရွှေမင်းသမီးလေးဆီ.. ညည အလယ်လာတဲ့ သိကြားမင်းက.. လူယောင်ဆောင် မင်းသားဇတ်လမ်းလေ..။
သူယူလာတဲ့..လက်ဆောင်ဟာ..အချိန်ကြာတာနဲ့အမျှ(အသက်ကြီးတာနဲ့အမျှ)… တန်ဖိုးကျကျသွားတာနဲ့ နှိုင်းပြပြောထားတာပေါ့..
ဘယ်တော့မှအချိန်မနှောင်း… သဘောထားလို့.. တွေ့တဲ့ကောင်လေးကောက်ချိပ်…
လက်ချင်းတွဲလို့.. မိုးပြိုအောင်.. လည်လည်ထွက်ကြပါလို့…။
ကျားရှေ့ချော်လဲ ဆိုသလို ဒီသဂျီးဆိုဒ်မှာမှ လာရေးရတယ်လို့။ :D
သဂျီးကတော့ ပြောချင်ဇောနဲ့ မှားသွားတယ်ထင်တယ်။
“ကောက်ချိပ်” အစား “ ကောက်ချိတ်” သာ ဖြစ်ပါကြောင်း။
မြန်မာ့မီးရထား အလုပ်လုပ်ကြောင်း သက်သေပြတာ။ :D
သူကြီးပြောတဲ့ ပုံပြင် က
ဒိန်ညင်းသီး ပုံ များ လား ဗျ
အပျိုလေးတွေ ဒီပို့စ်ကို ဖတ်ပြီး သင်ခန်းစာယူသင့်တယ် :D
အင်း …ပြောပြလိုက်မယ် ဒါပေမယ့် သီချင်းတွေကအချစ်သီချင်းတွေများတယ်
ဟဟ… နေတတ်ရင် ကျေနပ်စရာကောင်းပါတယ်ညီမလေးရယ်… မနောကိုဆို ခုလည်းပြောနေကြတာပဲ သီတင်းကျွတ်တော့မယ်နော်တဲ့လေ… လူတွေ လူတွေ ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားပြီး သူများကို ထွက်ရင် ထွက်ပြန်ပြီ လာရင် လာပြန်ပြီ နဲ့ မျက်စိဒေါင့်ထောင့်ကြည့်နေကြပုံပဲ။ ခုလည်း ပြောလိုက်ပါတယ်။ သီတင်းကျွတ်တော့မယ်နော်တဲ့ တစ်ခွန်းပဲ ပြောလိုက်တယ်။ သီတင်းကျွတ်ရင် လာကန်တော့လို့…. ကဲ မှတ်ကရော…
အောက်ဆုံးကတစ်ကြောင်းက စာရေးသူကိုယ်တိုင်မဟုတ်ကြောင်း သက်သေပြတာပေ့ါလေ
တကယ်တော့လည်း မရှိမကောင်း ရှိမကောင်းပါပဲ
အသက်၃၀ကျော်သွားလို့ မစွံနိုင်တော့ဘူးလို့ သတ်မှတ်ခံရတာ မြန်မာအသိုင်းအ၀ိုင်းကြောင့်လို့ ထင်တယ်။ ဒီမှာ အသက်၄၀ကျော် ၅၀ကျော် တစ်ခုလပ်တွေ မုဆိုးမတွေ ကြိုက်တဲ့သူတွေဝိုင်းဝိုင်းလည်နေတုန်း။ အရင်ယောက်ျားနဲ့ကလေးတွေရခဲ့တာတောင် ချစ်မြတ်နိုးကြ၊ အတည်လက်ထပ်ယူကြတယ်။ နောက်ကြောင်းကင်းပြီး လူလွတ်ဖြစ်မယ်၊ ကျန်းမာသန်စွမ်းမယ်၊ ကိုယ့်ကိုတစ်ကယ်နှစ်နှစ်ကာကာချစ်တဲ့သူမျိုးလို့ အားကိုးယုံကြည်ထိုက်မယ်ဆိုရင် တွေဝေမနေနဲ့တော့ဗျို့။ တစ်ယောက်ထဲအထီးကျန်ဘ၀နဲ့ မရုန်းကန်ချင်တော့တာသေချာရင် ဟိုဟာဖြစ်မှ ဒီဟာဖြစ်မှဆိုတဲ့ကြေးများတာတွေ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ကဲ့ရဲ့ဝေဖန်ခံရမလားဆိုတဲ့ တွေဝေတာတွေကို လုံးဝပယ်ဗျို့။
ရွာထဲမှာ ကလသား လူပြိုဂြီးတွေရှိတယ်လေ..
လူပျိုကြီးတွေဆက်သွယ်လို့ရအောင် လိပ်စာလေးလဲရေးထားပေးလိုက်ပါဦး မိုးဇီးရေ
အချိန်နဲ့ ဒီရေသည် လူကို မစောင့်တဲ့ ဗျ။
အဟဲ … အခု အချိန်တွေ ရှိပါသေးတယ်။ စိတ်ဓာတ် မကျပါနဲ့ဦး
ကျွန်တော် လဲအသက် သုံးဆယ်ကျော် နှင့် လေးဆယ်ကြားထဲမှာပါ
ကြည့်ရတာ ရွာထဲက အပျိုကြီးမမတွေကြားအောင် ဗျိုးဟစ်လားမှတ်ရ
အပူတွေ ရှာချင်လာရင် မလွယ်ဘူး..နော်။
တစ်ခါတုန်းက ရွာသူလေးဆူး စစ်တမ်းကောက်ကြည့်တော့ ဒီရွာထဲမှာ ၃၀ ကျော်တွေ အများဆုံးပဲတဲ့ …. ဒီရွာထဲမှာတင် ဖူးစာဖက်ရှာဖွေရေး အေဂျင်စီတစ်ခု ဖွင့်ရင် အဆင်ပြေလောက်တယ် …
အင်း…ယနေ့မှစ၍ ဂေဇက်အား မြှားနတ်မောင်ဂေဇတ်ဟုပြောင်းလဲခေါ်တွင်စေသော်….
သို့ပေမယ့်….နှမငယ်များ သတိရထားသင့်သည်မှာ ဤရွာအတွင်းမှီတင်းနေထိုင်ကြကုန်သော လပျိုသိုးကြီးများနှင့်မသိုးတသိုးများတို့သည် အရက်ဖိုးအကြွေးများနှင့် လုံးလည်ချာလည်လိုက်နေသူများဖြစ်ကြကုန်၏။
သို့ပါ၍ ငွေကုန်ကြေးကျခံခါ အရက်ဖိုးအကြွေး ဆပ်ပေး၍ သားမှတ်မှတ် မယားမှတ်မှတ်ပေါင်းသင်းစေလိုပါသော်…..
မှတ်ချက်။ ။မောင်ပုအား အကြွေးမည်မျှကျန်ရှိသေးကြောင်း သေသေချာချာစရင်းစစ်ရန်လည်းလိုအပ်ပါသည်ခင်ဗျား…
30 is not 40.
30+ is going to 40.They say 30 over, So you don’t think Only 30.
ဖူးစာဆိုတာ ဦးရာလူ ပါလို့ ပြောတဲ ချစ်ဦးသူပြောစကား လက်မခံလို့ ဝေးခဲကြပြီ။
အဲဒါပြောတာပေါ့ ငယ်တုံးက ဖိုင်နယ်မှာ တိုင်မကွယ်စေနဲ့လို့ပြောခဲ့တာလေအခုတော့ ဘာသွားလုပ်တော့မှာလဲ
အမှန်ကတော့ အချစ်ဆိုတာထက် လက်တွဲဖော် ဘ၀အတွက် အတူလျှောက်မဲ့ခရီးဖော်ကို
နောက်တစ်ခုက မြန်မာနိုင်ငံမှာ အသက်(၃၀)ကျော်ရင် သုံးမရတဲ့ အပျိုကြီးစာရင်းသွင်းလိုက်ပြီ
ရွှေညာသားတို့ကတော့ (၃၀)ကျော်လည်းချစ်တာပဲ လာထား .. … ..အာဘွားပဲ .. .. . .. ..
ko zaw min, Let her ease forawhile. Yes , soon going to 40 and then …………then we say 40 is not 50 . Don’t kill her hope.
ခင်ဗျားပြောတဲ့ အမ ၀မ်းကွဲဟာ တကယ်လို့matchlessmom သာဆိုခဲ့ရင်ပေါ့ဗျာ။
ဒီ ဇာတ်လမ်းဟာ ခင်ဗျားရဲ့အတွေးသက်သက်သာ ဖြစ်လိမ့်မယ်။
ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာ သူ့ ရဲ့ စိတ်ကို အသိဆုံး လူတစ်ယောက်ဟာ နိဂိမိ ၇၇ တစ်ယောက်ပဲ ရှိလိမ့်မယ်။
ဒါပေါ့ဒါပေါ့ မိန်းခလေးဆိုတာအသက် 15နှစ်ကနေ ၂၅နှစ်ထိဘဲ ဖလန်းဖလန်းထကျတာ။၂၅နှစ်ကျော်ရင်
discount time ယောက်သွားကော။လူဆိုတာချစ်ချင်တယ် …အချစ်ခံချင်တယ်..ချစ်ချင်းတွေအချစ်ခံခြင်းတွေးနဲ့ဝေးနေရင်လူဆိုတာအထီးကျန်တက်တယ်။မိုးပေါ်မှာလည်းငှက်ကလေးတွေပူကျိပူကျိနဲ့ ချစ်ရည်လူးနေတယ်..ရေထဲမှာလည်းငါးလေးတွေပလုံစီနေအောင်ချစ်ရည်လူးနေကျတယ်….အပျြို ကီးလည်းချစ်ချင်ရှာမပေါ့….ယောက်ကျားလေးကတော့ ၄၀မှစတယ်လို့အားလုံးကပြောကျပါဒယ်……:P
ကျွန်မ ဘဲလေး က တော့ လက်လန်တယ်..
တစ်ခါတွေ့ တိုင်း ဖိနပ်တစ်ရံ ဝယ်…
( စနဲ အဖွဲ့ ၏ ဒိန်းဂျား သီချင်းကို စာပြောင်းထားခြင်း )
လူပျိုလေးများအသက်ကြီးလာရင်လူပျိုကြီး လူပျိုကြီးကအသက်ကြီးလာတော့ အဖိုးကြီးတဲ့
အဓိပ္ပါယ်က အသက်ကြီးလာလေ တန်ဖိုးကြီးလာလေမို့လို့ ပြောတာဖြစ်မယ်…..
အပျိုလေးကနေ အသက်ကြီးသွားရင် အပျိုကြီး အပျိုကြီးကအသက်ကြီးသွားရင်
ယပင့်(ျ) ပျောက်လို့ “အပိုကြီး´´ ဖြစ်သွားတတ်ပါသဖြင့် အချိန်ရှိတုန်းလေးကြိုးစားထားဖို့
ရွာထဲမှ အပျိုကြီးများအား အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်ခင်ဗျား ………..